နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် ပြုလုပ်မှု အများဆုံး ၂၈ ရက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်းနေ့ချင်းပြီးအခမဲ့ ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် ပြုလုပ်မှု အများဆုံး ၂၈ ရက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်းနေ့ချင်းပြီးအခမဲ့ ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြုလုပ် မှုအများဆုံး ၂၈ ရက်ဖြင့် ပြုလုပ်ပေးမည်ပြီး အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာ ရင်းနေ့ချင်းပြီးအခမဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦး စီးဌာန၏ ကြေညာချက်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သ တင်းစာများ၏ ဖော်ပြချက်အရသိရသည်။
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအတွက် ကတ်အသစ်ပြုလုပ်မှု (၆) ကျပ်၊လဲလှယ်မှုအတွက် (၃) ကျပ်၊မိတ္တူပြုလုပ်မှုအတွက်ကျပ် (၁ဝ)သတ်မှတ်ထားကြောင်းထိုကြေညာ ချက်အရသိရသည်။ မွေးရာပါနိုင်ငံသားများ အတွက် မိုးပွင့်စီမံချက်များဖြင့် နိုင်ငံ သားစိစစ်ရေးကတ်များအား ဖြေလျှော့ခြင်းများ ပြုလုပ်၍နိုင်ငံတစ် ဝန်း ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ် ပြီးမိုးပွင့်အဆင့် ၅ အားဧပြီလ ၁ ရက်တွင် ပြန်လည်စတင်ကာ နှစ်လ ကွင်းဆင်း၊နှစ်လမြို့နယ်ရုံးတွင် ဆောင်ရွက်မည့် စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက် ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ သွေးနှောပြည်သူများအတွက် အခြေခံမှတ်တမ်းများဖြင့် တိုက်ဆိုင် စိစစ်ရန်လိုအပ်ချက်အရ မြို့နယ်ရုံး များတွင်သာဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ် ကြောင်းဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ကယားပြည်နယ် ရှစ်မြို့နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၁ဝ မြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ MPSI စီမံကိန်းနယ်မြေ) ပအို့ဝ်ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ သုံးမြို့နယ်နှင့် မြို့နယ်ခွဲနှစ်ခု၊မွန်ပြည်နယ် ခုနှစ်မြို့ တို့တွင် One Stop Service အခမဲ့ကွင်းဆင်းဆောင် ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းထပ်မံ ဖော်ပြထားသည်။
လိုအပ်ချက်များအနေဖြင့် ဓါတ်ပုံသုံးပုံ၊သွေးစစ်ချက်၊အိမ်ထောင် စုစာရင်း မိတ္တူ၊ရဲစခန်းနှင့် ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက် တို့ဖြစ်ကြောင်း ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ (၁) ရက်မှစ၍ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက်အထိနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားပေါင်း (၃ဝ၇၉ဝ၉၄) ထုတ်ပေး ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
.netShoutout100zakladok2 Tag2linkmeA97abiAdftyAdifniAmazonAmen Me!AOL MailAPSenseArmenixArtoAviary CaptureAzadegiBaangBaiduBallTribeBeat100BeboBentioBiggerPocketsBit.lyBizSugarBland takkinnBlinklistBlipBloggerBloggyBlogkeenBlogmarksBlogtrottrBlurpaliciousBO.LTBobrdobrBonzoBoxBookmarkingNetBookmarky.czBookmerkenBrainifyBryderi.seBuddyMarksBufferBuzzzyCamyooCardThisCare2ChimeChiqCiripCiteULikeClassicalPlaceCleanPrintCleanSaveclipDOCndigColivia.deCommunicateConnoteacOOtopiaCopy LinkCOSMiQCSS BasedCurate.usDeliciousDesignBumpDigaCulturaDiggDiggitaDigoDigThisHostDigzignDiigoDipdiveDoMelhorDostiDotNetKicksDoubanDraugiem.lvDrimioDropjackDuduDzoneEdelightEFactoreKudoselefanta.plEmailEmbarkonseuCliqueiEvernoteextraplayEzySpotFabDesignFabulously40FacebookFarkFarkindaFashiolistaFAVableFavesfavlogFavoritenFavoritesFavoritusFlakerFloss.proFolkdFormspringFreeDictionaryFresquiFriendFeedfunPfwispGabbrGamekickerGGGiftery.meGigBasketGiveALinkGlobalGrindGmailGo.vnGood NoowsGoogleGoogle+GreaterDebaterGrono.netHaber.gen.trHacker NewsHadash HotHatenaHealthimizeHedgehogsHelloTxthistoriousHot BookmarkHotklixHotmailHTML ValidatorHyvesIdenti.caIDibbItihavegotIndex4IndexorInformazioneInstapaperInvestorLinksiOrbixIRepeateriSocietyiWiWJamespotJappy TickerJoliPrintJollyJumptagsKaboodleKaevurKaixin RepasteKetnooiKindle ItKipupKledyKommentingLa tafaneraLibrerioLiDAR OnlineLifestreamLink NinjaLinkedInLinks GutterLinkSharesLinkuj.czLiveJournalLockerBloggerLogger24Mail.ruMarkmeMashantMashbordme2daymeinVZMekusharimMemonicMemori.ruMendeleyMen√©ameMessengerMindbodygreenMister WongMoemesto.ruMoikrugmototagzmRcNEtwORKMultiplymyAOLMyHayastanMylinkvaultMyspaceN4GNasza-klasaNetLogNetvibesNetvouzNewsMeBackNewsTrustNewsvineNujijOdnoklassnikiOKNOtizieOneviewOrkutOyylaPackgPafnetPDF OnlinePDFmyURLPhoneFavsPing.fmPlanypusPlaxoPlurkPochvalPocketPoliticNotePosteezyPosterousPrati.baPrintPrintFriendlyPushaQRF.inQRSrc.comQuantcastQzoneRedditRediff MyPageRedKumResearchGateRideFixSafelinkingScoop.atScoop.itSekomanSelect2GetherSharerShavehShe Told MeSina WeiboSkyrock BlogSMISnip.itSodaHeadSonicoSpeedtileSpinSnapSpreadlyspringpadSquidooStartaidStartlapStoryFollowerstudiVZStuffpitStumbleUponStumpediaSunlizeSUP BROSurfingbirdSvejoSymbalooTaazaShareTagzaTaringa!TarpipeTextmeThe Web BlendThinkfinityThisNextThrowpileto.lyTopSitelerTransferrTranslateTuentiTulinqTumblrTvinxTwitterTwitThisTypepadUpnews.itUrlaubswerkURLCaptViadeoVirbVisitezMonSiteVKontaktevKruguDruzeiVOX SocialVybraliSMEVyoomWebnewsWebShareWerKenntWenWhois LookupWindy CitizenWireFanWordPressWorioWowBoredWrite Your RepWykopXangaXINGY! BookmarksY! MailYammerYardbarkerYemleYiggYookosYoolinkYorumcuyumYoublrYoubookmarksYouMobYuubyZakladok.netZicZacZingMeZukmo
မျိုးဗီဇ DNA တရားဝင် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ မကြာမီဖွဲ့မည် →